China Hollow Core Wall Panels Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | Amulite
Hollow Core Wall Panels-pamokarana
China Amulite Group, AM-WZMZD-3000 * 600 Style Hollow Core Wall Panels Production Line dia ahitana: Fambly Concrete Mixing Plant, System pourour, automatique Wall Panel Forming Machine, System Ferry Rails System, Rafitra fitehirizana Material Raw.
Ny lohanay vita amin'ny rindrina loaka vita amin'ny rindrina dia zavamaniry mandeha ho azy tanteraka, miaraka amin'ny ambaratonga avo kokoa, ny rafitra fampitahana marina, ny rafitra fampifangaroana tsara, dia afaka manamboatra fitambarana marimaritra kokoa, fitambarana henjana, fampisehoana tsara, fihazakazahana mihazakazaka, fandidiana mora, fahombiazan'ny asa ambony kokoa; Ny famolavolana ny lasitra Panel dia manana fahamendrehana avo kokoa, fahazaran-tena tsara, fametrahana mora, ho an'ny tontolon'ny rindrambaiko novokarina dia manana fahombiazana milamina kokoa, tsy misy fihoarana, tsy misy triatra; Ho an'ny rafitra mpivezivezy amin'ny milina, manomeza traikefa mihazakazaka azo antoka sy azo itokisana, fiasa mora ary fitehirizana toerana;
Famokarana Fampidirana dingana
Ny vovo dia afaka mamokatra gazy, miteraka solika, mamokatra herinaratra, izay manome etona ho an'ny zavamaniry.
Rafitra fampidirana fitaovana mandeha ho azy
Rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy
3. Pipe Core
4. Fitaovana paompy mandeha ho azy
5. Fiara bobongolo amin'ny rindrina
Fitaovana: Steel avo lenta, Ny fiara bobongolo dia vita amin'ny vy avo lenta, azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava, tsy misy endrika; Ho an'ny bobongolo, makà fitaovana firaka vita amin'ny aliminioma, tarehy miendrika vovoka, afaka manao endrika ivelany amin'ny rindrina, tsara tarehy; Afaka manao fitaovana mandeha ho azy, avelao hivezivezy mandeha ho azy ny milina.
6.Wall Panel Panel mandeha ho azy Machine milina
Miaraka amin'ny fiara mifangaro bobongolo mandeha ho azy, ny fotoana iray dia afaka manamboatra 10PCS amin'ny tontonana, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha, mamonjy amin'ny asa, satria manana fiovana mandeha ho azy ny milina, aorian'ny Wall Panel miorina, afaka mamorona 90 degre, mora esorina ny bobongolo vita amin'ny aliminioma;
Teo aloha: Biriky mandeha ho azy manao tsipika famokarana
Manaraka: China Amulite Group MGO Board Production Line
Masinina tontonana simenitra goaka
Masinina tontonana vita amin'ny simenitra
Masinina Panel Hollow Core
Masinina fanaovana lafaoro matevina
Masinina fanamboarana rindrina mihantona
Fitaovana tontonana mivelatra amin'ny rindrina